ATTENTION BURMESE COMMUNITY OSLO : MEETING WITH KO MIN KO NAING AND PYONE CHO | democracy for burma
ATTENTION BURMESE COMMUNITY OSLO : MEETING WITH KO MIN KO NAING AND PYONE CHO
tags: 88 generation student leader, Burma, Burmese Community, Ko Min Ko Naing, Meeting, Myanmar, Norway, OSLO, PYONE CHO
Min Ko Naing will receive the student peace price that awarded in 2001, 17-18 February at Oslo.
Mandag 18. februar, kl. 13.15-14.45
Draft Oslo program 17-19 February
Sunday: 17 February
11: Arrive Oslo (SK347 arriving to Gardermoen 10:15, from Værnes 09:20). Transport to hotel.
11-13: See Oslo/Press
13-16: Meeting Burmese
16-18: Dinner (All Burmese invited, probably same place as the meeting Litteraturhuset).
Evening: Concert/Cultural event.
Please share from your Gmail og Facebook status to meet with our students leders!
– နော်ဝေနိုင်ငံသို့ ကျောင်းသား ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို လက်ခံ ရယူရန် ကိုပြုံးချိုနှင့် ကိုမင်းကိုနိုင် တွေ့ ချင်သူများသို့ 
၆, ၂ , ၂၀၁၃
PHOTOCREDIT TUN WAI
ကိုမင်းကိုနိုင် သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်၌ နော်ဝေ နိုင်ငံမှ ရရှိခဲ့သော ကျောင်းသား ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို လက်ခံ ရယူရန် ကိုပြုံးချိုနှင့် အတူတကွ နော်ဝေနိုင်ငံသို့လာရောက်ပါမည်။
နော်ဝေ မြန်မာ ကော်မတီသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့၌ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ကိုပြုံးချိုတို့နှင့် နော်ဝေရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားများ အားလုံးနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ အောက်ပါဖောင်တွင် အင်္ဂလိပ်လိုဖြည့်၍ အမည်စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
တွေ့ ဆုံရန် အမည်စာရင်း ပေးသွင်းရန် (နှိပ်ပါ )
အ်ာစလို ခရီးစဉ် အစီအစဉ် အကြမ်း။
– တနင်္ဂနွေနေ့၊ (၁၇) ဖေဖော်ဝါရီလ
၁၁ နာရီ၊ အော်စလိုသို့ ရောက်ရှိချိန် (SK347 လေယာဉ်ဖြင့် Værnes လေဆိပ်မှ ၉ နာရီ ၂၀ မိနစ်၌ ထွက်ခွါလာပြီး အော်စလို Gardermoen လေဆိပ်သို့ ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်၌ ရောက်ရှိမည်။)
၁၁-၁၃၊ အော်စလို၌ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်မည်။
၁၃-၁၆၊ မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားများနှင့် တဝ တွေ့ဆုံမည်။
၁၆-၁၈၊ ညစာစားပွဲ (နော်ဝေ နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား၊ တိုင်းရင်းသားများ အားလုံးအား ဖိတ်ကြားပါသည်။ Litteraturhuset ကဲ့သို့ တစ်နေရာတည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။)
ညနေပိုင်း၊ အတီးအမှုတ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဖျော်ဖြေပါမည်။
← LADPADAUNG PROTEST VIDEOS 14.FEBRUARY 2013-KO HAN WIN AUNG
Daw Aung San Suu Kyi takes advise from Aussie economist Sean Turnell. →